Taariikhda My Butros » 5 Waxyaabaha Girls Ma Ka dib markii weyni ka a
Aan ay wajahayaan, jebiyaan-upka way adag tahay. Cid kasta ha bilaabay, dhowrka toddobaad ee hore u muuqdaan inay ugu adag ee. Iyadoo, ugu danbeyn, waxaan dhamaan guurto on in la helo caashaqa kale, waxaa jira dhowr waxyaalood oo ah in gabdhaha dhan sameeyo ka dib markii uu jabiyay. Dhowr A waxaa hoosta ku qeexan:
1. Dhawaaqaya – badan oo
Ha ahaato Hadaba badan xasuus, hadiyad, song, ama si lama filaan ah kadiska ah ee dareenka, oohin ciday ku dhici doona. La dhaawacay oo muujinaysa dareenka waa talaabada ugu horeysa ee nidaamka post fasax-up bogsiinta.
2. Facebook caws iyada ex
Iyadoo jiritaanka baahsan ee warbaahinta bulshada, tani waa waxyaabaha ugu cad iyo burbur gabdhaha sameeyo ka dib markii la jabsaday ilaa laga yaabaa. Xitaa ka dib markii un-friending, gabdhaha aan ku caawin kartaa, laakiin qor magaca iyada ex galay bar raadinta iyo si joogto ah isaga iyo wax kasta oo sawir dabasocdaa, page, iyo xaaladda uu jeclaa ama faallo ah.
3. Usan xiirashada
Iyadoo ay taasi dhacdo si ay u taageeraan haweenka ee ka caroodaan ah inay noqoto mid isku dhexyaac ragga. Waxaa kale oo ay sabab u tahay xaqiiqda ah in dhamaan wajiga gabdhaha fasax wadnaha tago yar tamarta lahayn. More, isagoo dhowaan la hal ninna ma jiro oo yaab iyo gabdhaha in ay daryeeli karin yar haddii lugaha iyada waa xiirto ama ma.
4. Goes marayo a “floozy” stage
Heerkan waxa ay ku xiran tahay gabar in gabar iyo sidoo kale ku xiran tahay muddada xiriirka ka socday. Laakiin waa nabad ah ay u sheegaan in aan loo eegayn waxa, gabar kasta maraa marxaladan hab qaar ka mid ah ama mid kale. Haddii ay tahay isagoo hal cabitaan fara badan oo, qoaal, ama helitaanka saaxiibtinimo la guys badan.
5. Nafteeda u curiyaa marayo is-daahfurka oo isku dayaya wax cusub
From buugaagta self-help in filimada iyo buugaagta u Waxyoon in yoga, Gabar kasta oo isku dayo ay nafteeda loo cusboonaysiiyo. Tacsiyaynta Tani waa arrin aad u muhiim ah in wareegga fasax-upka maadaama ay kaliya ma ahan caawisaa si loo farsameeyo walbahaar, lakiin waa daqiiqad ah shakiyaan meesha gabdhaha “ka heli” nafteeda.
Iyadoo jacaylka xanuujiyo, waxaa muhiim ah in la xasuusto in jacaylka sidoo kale aad u xoog badan.
13 Winter Taariikhda Fikradaha Experience a bilicsan